IRUISSIA: IKremlin ifuna kudedelwe amaRussia ayeboshwe eBelarus - Teles
IRUISSIA: IKremlin ifuna kudedelwe abaseRussia ababoshwe eBelarus
Abezokuphepha baseBelarus babambe abantu baseRussia ngoLwesithathu, bethi babethunywe ukukhipha izwe enxebeni.
IKremlin icele umfelandawonye waseSoviet waseBelarus ukuthi akhulule amadoda angama-33 aseRussia ayeboshelwe eMinsk ngecala okusolwa ukuthi lizohlela udlame ngaphambi kokhetho lukamongameli lwangonyaka ozayo.
Abezokuphepha baseBelarus babambe iqembu laseRussia ngoLwesithathu, bethi bangabantu abazimisele ukudingida izwe ngaphambi kokhetho lwango-Agasti 9.
Abezokuphepha e-Belarusian KGB bathi la madoda angamalungu eWagner Group, okuyinkampani ezimele eyaziwayo elawulwa ukuthi ilawulwa umfelandawonye kaMengameli waseRussia uVladimir Putin.
"Siyethemba ukuthi kungekudala lesi sehlakalo sizochazwa ngabalingani bethu baseBelarus nokuthi izakhamizi zizodedelwa," kusho okhulumela iKremlin uDmitry Peskov ngoLwesihlanu.
Wengeze nokuthi "ukuboshwa okungenasisekelo kwezakhamizi zaseRussia akuhambelani kangako nemikhakha yobudlelwano obuhlangene".
Abaphenyi baseBelarus bathi la madoda abesebenza nabagxeki abaphikisayo abavelele uSergei Tikhanovsky kanye noMikola Statkevich, bobabili balengiswa futhi bavinjwa ukungenela ukhetho.
UDevkov ukuqinisekisile ukuthi amadoda aseRussia "ayengabasebenzi benkampani yezokuphepha yangasese" ayehlala isikhashana eBelarus ngaphambi kokuhambela e-Istanbul.
“Baphuthele indiza yabo,” kusho yena. “Babenamathikithi e-Istanbul. "
Umphenyi waseBelarusian uthe emibonweni yethelevishini ukuthi amasu amadoda alolu hambo lokuya phambili yi-"alibi," kusho izindaba zeTut.by.
"Njengoba uphenyo lutholile, babengenazo izinhlelo zokuya lapho (ukuya e-Istanbul)," inhloko yethimba labaphenyi, u-Alexander Agafonov, uthe engxoxweni nabethelevishini kuzwelonke. .
Amadoda anikeze izimpendulo "eziphikisanayo", wanezela.
Abayishumi nanye babo bathi bahlose ukundiza baye eVenezuela, abayi-15 baya eTurkey, babili baya eCuba kanti oyedwa waya eSyria. Omunye "ubengazi ukuthi ubendiza kuphi kanti abanye benqabile ukufakaza," kusho u-Agafonov.
Emhlanganweni omkhulu wokhetho enhlokodolobha iMinsk ngoLwesine, uSvetlana Tikhanovskaya - Isimbangi esikhulu saseBelarus u-Alexander Lukashenko - uphikile ukuthi abaphikisi basebenzisana nezikhulu zaseRussia ukuvusa umbango. isisindo.
UTikhanovskaya, oshade ne-blogger enejele, uTikhanovsky, uthe abantu bafuna kuphela ukhetho olunobulungiswa.
Uthe osonkontileka abazimele baseRussia kungenzeka ukuthi basebenzise iBelarus njengendawo yokuhamba isikhathi eside futhi babuza isikhathi sokuboshwa kwaleli sonto.
umthombo: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/kremlin-demands-release-russians-held-belarus-200731203427261.html
Abakwa-COVID-19: 4 basebenza ngomkhumbi ohamba ngezikebhe eNorway esibhedlela
I-DRC: izizathu ezintathu zokwehla kwenzuzo kweRawbank ngonyaka ka-2019